प्रदेश २ : एक तर्फ ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ जारी अर्को तर्फ बेटी माथि एसिड प्रहार – Shirish News
जनकपुृर, २०गते भाद्र
प्रदेश २ मा ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान जोडतोड के साथ चलि रहेको बेला अर्को तर्फ बेटीहरुमाथि आक्रमण हुने क्रम रोकिएको छैन । कतै बेटीलाई दाइजो निहुँमा जलेर मर्नु परेको अवस्था छ भने कतै बेटी माथि एसिड प्रहार भईरहेको छ ।
यस्तै एसिड प्रहारबाट प्रदेश २ कै आर्थिक राजधानीको नामले चिनिने विरगंज महानगरपालिकामा एक बेटी माथि विहानै एसिड प्रहार गरिएको छ । एसिड प्रहारबाट घाइते उक्त बेटी अहिले जिवन मरणको दोसाध अस्पतालमा छटपटाई रहेकी छिन् ।
अहिले प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान प्रभावकारी नभएका कारण महिला हिंसा बढ्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
अभियानको गलत नीतिका कारण अझै महिला, बालिका हिंसामा पर्दै गएको हुनाले प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानको नीति मै परिवर्तन गर्नुपर्ने समाजिक अभियन्ताहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
विहानै विद्यालय पढ्न भनेर हिडेकी वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ छप्कैया की १५ वर्षीया मुस्कान खातुन माथि एसिड आक्रमण गरिएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ छप्कैया स्थित मामाको घरमा बसेर अध्ययन गर्दै गरेकी मुस्कानमाथि विद्यालय जाँदै गरेको बेला आज शुक्रबार विहान स्थानीय दुई किशोरले एसीड प्रहार गरे ।
सीड प्रहारबाट खातुनको अनुहार, छाती, हातखुट्टा लगायतका शरीरको भाग जलेको छ ।
वीरगन्ज कै वडा नम्बर २, छप्कैयाका स्थानीय सम्साद आलम र माजिद आलम मिलेर विहान ६ बजे मुस्कानमाथि एसीड छ्यापेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको अनुसार एसीड छ्यापेर फरार उनीहरूमध्ये मुख्य अभियुक्त साम्सद आलमलाई पक्राउ गरेको छ । अर्का अभियुक्तको पनि खोजी भइरहेको छ ।
दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै वीरगञ्जका युवाहरुको प्रदर्शन
मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहार गर्ने दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै वीरगञ्जका युवाहरुले आज प्रदर्शन गरेका छन् ।
युवा नेता शेख मुन्नाको अगुवाइमा युवाहरुको एक समुहले वीरगञ्जको घण्टाघर चौकमा शुक्रबार दिउँसो प्रदर्शन गरेका हुन् ।
युवाहरुले एसिड पीडित खातुनको दोषीलाई कडा कारवाही गर्नु पर्ने, महिला दिदीबहिनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, फरार दोषीलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी कारवाही गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शन पश्चात् आयोजित कोणसभामा बोल्दै समाजिक अभियान्ता ओम प्रकाश सरार्फले दोषीलाई हदैसम्म कारवाही हुनुपर्ने माग गरे ।
त्यस्तै राजपाकी महिला नेतृ रम्भा मिश्र, कांग्रेसकी सुस्मा तिवारी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी जलेश्वर सरार्फ, समाजिक अभियान्ता मोनिका सिंह लगायतले एसिड प्रहार घटनाको कडा रुपमा निन्दा गर्दै दोषीलाई कारवारहीको माग गरे ।
एक तर्फी प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा एसिड प्रहार
एक तर्फी प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा मुस्कान माथि एसिड प्रहार गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
वीरगञ्ज २ छपकैयाका माजिक मियाँ हजार र सम्साद मियाँ हजारले एसिड प्रहार गरे । उनिहरुको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा मुस्कान माथि शुक्रबार बिहान करिब ६ः३० बजेतिर वीरगञ्ज ११ श्रीपुर घर भई हाल छपकैया ३ मा मामा घरमा बस्दै आएकी १५ वर्षीया मुस्कान खातुनमाथि महानगरपालिका ४ गणेशमान चौकमा एसिड प्रहार भएको हो ।
शुक्रबार बिहान वीरगन्जको ६ नम्बर गेट नजिकै रहेको श्री त्रिभुवन हनुमान माध्यमिक विद्यालय गइरहेकी उनलाई बीच बाटोमै रोकेर ती युवकहरुले एसिड प्रहार गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक अनन्तराम शर्माले बताए ।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत खातुनलाई माजिक मियाँ हजारले एकतर्फी प्रेम गर्दै आएका थिए । मुस्कानलाई माजिदले पटक–पटक प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए । तर, मुस्कानले उनको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
थप उपचारको लागि काठमाडौं रेफर
एसिड प्रहारबाट खातुन गम्भिर घाइते भएकी छन् । उनलाई तत्काल उद्धार गरी वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । तर, त्यहाँ उपचार सम्भव हुने स्थिती नदेखिए पछि थप उपचारको लागि काठमाडौं रेफर गरिएको अस्पतालका चिकित्सकले जनाएको छ ।
एसिड प्रहारबाट खातुनको दाहिने खाला पट्टीको भाग, घाँटी, छाती र हात जलेको छ । उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकहरुले जनाएको छ ।
एसिड प्रहारबाट घाइते भएकी मुस्कानको उपचारका लागि पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । यादवले ५० हजार र सरावगीले १५ हजार आर्थिक सहयोग गरेका हुन् ।
फरार माजिकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन
एसिड प्रहार गरी भाग्न खोज्दा माजिकसँगै रहेका सम्सादलाई स्थानियले पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए । मुख्य आरोपी माजिक भने फरार छन् । उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
फरार माजिकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरि सकेको पर्साका प्रहरी नायव उपरीक्षक अनन्तराम शर्माले बताए ।